के मोबाइल फोनको प्रयोगले क्यान्सर हुन सक्छ ? | Nepsole के मोबाइल फोनको प्रयोगले क्यान्सर हुन सक्छ ? | Nepsole
के मोबाइल फोनको प्रयोगले क्यान्सर हुन सक्छ ?
तपाईको मोबाइलबाट निस्कने रेडिएशनले कतिको हानी पु¥याउन सक्छ ? के रेडियशनबाट ट्युमर हुने खतरा रहन्छ ? यसबाट आफुलाई कसरी बचाउन सकिन्छ ?यी र यस्तै प्रश्नहरुको जवाफ वैज्ञानिकहरुले धेरै वर्ष अघिदेखी खोजीरहेका छन् तर आजसम्म जवाफ भने मिलिसकेको छैन् ।
तरपनि दुईवटा कुरा भने प्रष्टै छन् ती के हुन् भने रेडियो फ्रिक्वेन्सी वेब नन आओनाइजेशन रेडिएशन हुन् जुन एक्सरे तथा अल्ट्राभाइलेट रेडिएशनको तुलनामा कम क्षमतावान् हुन्छन् । एक्सरे तथा अल्ट्राभाइलेट रेडिएशन हाम्रो शरीरमा रहेको डीएनएमा पाइने केमीकल ब्राण्डलाई तोडिदिनेसमेत क्षमता राख्दछन् । स्वास्थ्य सम्बन्धी सन्देश रेडिएशनको प्रभावले दिमाग, टाउको तथा घाँटीमा ट्युमर हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयमा अमेरीकन क्यान्सर सोसाइटीले एउटा खोज गरिरहेको छ ।
सोसाइटीका अनुसार मोबाइल फानेबाट निस्कने रेडिएशन त्यति धेरै हानीकारक नहुने भएकाले पनि उक्र रेडिएशनले मानव शरीरमा क्यान्सर उत्पादन गर्न भुमिका खेल्दछ नै भनेर भनिहाल्ने अवस्था छैन् । कुनै पनि मोबाइल कम्पनीले आफुले उत्पादन गरेका मोबाइलबाट कति मात्रामा रेडिएशन निस्कन्छ भन्ने बारेमा जानकारी दिनुपर्ने नियम भएपनि यसतर्फ खासै ध्यान दिइरहेको हैदौनैँ । जर्मन फेडरल अफिस फर डेटा प्रोटेक्सनले एक यस्तो सुची बनाएको छ जसबाट कयौँ नयाँ तथा पुराना स्मार्टफानेबाट निस्कने रेडिएशनका बारेमा रेडिएशनबा बारेमा जानकारी पाउन सकिन्छ ।
सबैभन्दा बढी रेडिएशन फाल्ने सुचीमा वज प्लस तथा हुवावी तथा नोकिया लुमिया ब्राण्डका मोबाइलको सुचीमा रहेका छन् । यसैगरी रेडिएशन धेरै फाल्ने मोबाइलको सुचीमा आइफोन सेभेन, १० नम्बरमा रहेको छ भने आइ फोन एट, १२ नम्बरमा, आइफोन सेभेन प्लस १५ नम्बरमा रहेका छन् । यसैगरी सोनी एक्सपेरीया एक्स जेड कम्प्याक्ट ११ नम्बरमा, जेड टी ई एक्सन ७ मीनी १३ नम्बरमा, ब्लेकबेरी डीटीईके ६० १४ पनि धेरै रेडिएशन फाल्ने मोबाइल अन्तर्गत नै पर्ने गरेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ । रेडियोफ्रीक्वेन्सी बाट कसरी बच्ने ? रेडियो फ्रीक्वेन्सी सबैभन्दा बढी हामीले बोक्ने मोबाइल फोनको भित्र रहने एन्टिना नजिकै रहेको हुन्छ । यसकारण जति हामी मोबाइल चलाउँछौँ वा नजिक राख्छौँ उती नै रेडिएशनको सम्पर्कमा रहिरहेका हुन्छौँ । यी भन्दाबाहेक अन्य कारणहरुले पनि रेडिएशनको सम्पर्क बढी हुन सक्दछ । जस्तो कि तपाई कति समयसम्म मोबाइल चलाइरहनुहुन्छ ? मोबाइल फोन सिग्नलको ट्राफिक ।
अत्याधिक फ्रिक्वेन्सीबाट बच्ने उपाय फानेलाई स्पीकर वा हेण्ड्स फ्रि मोडमा प्रयोग गर्ने गरौँ, फोन कल भन्दा म्यासेजमा बढी कुरा गर्ने बानी बसालौँ, कम एसएआर लेबल भएको मोबाइल खरिद गरौँ ।
विभिन्न मिडियाको सहयोगमा